Tsy ny fizahan-tany ihany no nifarana tany Arzantina, Uruguay ary ny Alahady Paraguay
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy ny fizahan-tany ihany no nifarana tany Arzantina, Uruguay ary ny Alahady Paraguay
Tsy ny fizahantany ihany no nijanona tamin'ny alahady, fa ny ankamaroan'ny hetsika dia tapaka tamin'ny olona an-tapitrisany maro tany Arzantina, Uruguay ary Paraguay taorian'ny fanapahana herinaratra mahery vaika.
Niezaka mafy ny mpitondra hamerina ny herinaratra, fa ny ampahatelon'ny olona 44 tapitrisa ao Arzantina dia mbola tao anaty haizina hatramin'ny vao harivan'ny andro.
Nijanona ny fitateram-bahoaka, nakatona ny fivarotana ary nampirisihina ireo marary miankina amin'ny fitaovana fitsaboana any an-trano mba handeha hopitaly miaraka amin'ny motera.
Ao anaty fahasimbana ny tariby misy ny herinaratra any Arzantina, miaraka amina tariby sy tariby izay nohatsaraina satria ny tahan'ny herinaratra dia nijanona an-taonany maro. Nanam-pahaizana manokana momba ny angovo Arzantina nilaza fa ny lesoka tamin'ny fandidiana sy ny famolavolana rafitra dia nandray anjara tamin'ny fianjeran'ilay tariby.
Nilaza ny orinasan'ny angovo Uruguay UTE fa ny tsy fahombiazan'ny rafitra Arzantina dia nanapaka ny herin'i Uruguay rehetra tamin'ny fotoana iray ary nanome tsiny ny fianjerany tamin'ny “lesoka teo amin'ny tambajotra Arzantina.”
Any Paraguay, tapaka ihany koa ny fahefana any amin'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra atsimo, akaikin'ny sisintany miaraka amin'i Arzantina sy Uruguay. Ny fitantanana ny angovo nasionaly ao amin'ny firenena dia nilaza fa ny serivisy dia naverina tamin'ny tolak'andro tamin'ny alàlan'ny fanodinana angovo avy amin'ny tobin-drano herinaratra Itaipu izay zarain'ny firenena amin'i Brezila mpifanolo-bodirindrina aminy.
Any Arzantina, ny faritany atsimo indrindra amin'ny Tierra del Fuego ihany no tsy tratry ny fahatapahan'ny fahatapahana satria tsy mifandray amin'ny tariby lehibe.
Nilaza ny tompon'andraikitra Breziliana sy Shiliana fa tsy nisy fiantraikany tamin'izany ny fireneny. Tsy mbola nisy toy izany ny fahatapahana tamin'ny tantara tato ho ato.
Dreamliner B787 manaraka no hipetraka aorian'ny Boeing 737 MAX?